Qunsuliyadda Dawladda Turkey-ga u Joogta Somaliland oo hab cusub u dejisay nidaamka codsiga fiisaha (New Online Visa Application Process). |
Qunsuliyadda Dawladda Turkey-ga u Joogta Somaliland oo hab cusub u dejisay nidaamka codsiga fiisaha (New Online Visa Application Process).
Hargeisa (GNN)-Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dawladda Jamhuuriyadda Turkey-ga ayaa soo saartay hab cusub oo lagu dalban karo fiisaha lagu galo dalka Turkey-ga taasoo si rasmi ah u dhaqangalaysa 5-ta bisha January 2016 sannadkan cusub.
Qoraal Qunsuliyadda Turkey-ga u joogta Somaliland ay usoo gudbisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL ayaa lagu caddeeyay nidaamka cusub ee codsiga fiisaha Turkey-ga sidan hoos ku sheegan:-
Dadka u baahan fiisaha Turkey-ga ee aan qaadan karin fiisaha elaktarooniga ah/E-visa waxa laga doonayaa inay marka hore ku codsadaan fiisaha (Fiisayaasha dhammaan ujeedooyinka socdaal) si Online-ah iyagoo ka codsanaya mareegta www.visa.gov.tr. (Ciddii u qalmi karta fiisaha elaktarooniga ah/E-visa faahfaahintiisa waxa laga heli karaa www.evisa.gov.tr/en/);
Kadib marka uu qofku sidan sare u codsado fiisaha, wuxu booqanaya xarunta Qunsuliyadda Turkey-ga ee Hargeysa sida ballanta loogu qabto;
Mudada codsiga ballanta ee Qunsuliyadda, codsadayaashu waa inay soo buuxiyaan dhammaan wixii shuruudaha ah, soona gudbiyaan wixii dhukmentiyo ama caddaymo qoraal ah ee la xidhiidha codsigooda;
Codsade kasta waa inuu si shakhsi ah u dalbado ballanta fiisaha;
Araajida fiisaha marka la aqbalo ayaa la bixinayaa lacagta fiisaha; haddii la diido codsiga fiisaha, dib uma heli karo qofku lacagtii uu bixiyay ee fiisaha;
Dhammaan dadka codsanaya fiisaha waxa sidoo kale laga doonayaa inay haystaan caymis caafimaad socdaaleed shaqaynaya (Valid travel health insurance) oo ku siman mudada la filayo inay joogaan ama sii dhaafayaan Turkey-ga (Intended stay or transit);
Codsadayaasha iska yimaada Qunsuliyadda iyagoo aan ballan hore loogu samayn nidaamka Online-ka ah, lama aqbali doono, loomana adeegi doono;
Dhammaan Fiisayaasha dalku galka Turkey-ga waxa soo oggolaata Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jamhuuriyadda Turkey-ga, sidaa darteed, dadka fiisaha codsanaya waxa laga rabaa inay codsiyadooda gudbiyaan ugu yaraan ka hor afar todobaad xilliga la fili karo in lagu socdaalo si looga badbaado wixii dhibaato ah.